नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतरबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई साझा उम्मेदवार बनाउने शर्तमा डा. शेखर कोइराला सभापतिको दाबी छाड्न सहमत भएका छन् ।
पौडेललाई साझा उम्मेदवार बनाएर संस्थापनसँग भिड्न बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले गरेको आग्रहपछि शेखर पछि हट्न तयार भएका हुन् । एक केन्द्रीय सदस्यले दावी गरे । तर कोइरालाको सचिवालयले भने सभापतिको दावीबाट शेखर पछि नहट्ने स्पष्ट गरेको छ ।
अनुपम फूडल्यान्ड बत्तीसपुतलीमा बिहीवार बसेको संस्थापनइतरका केन्द्रीय सदस्यको बैठकले पौडेललाई साझा उम्मेदवार बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रकाशमान सिंह समेतलाई मनाएर साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेका थिए । प्रकाशमान उम्मेदवार बन्ने अवस्थामा भने रामचन्द्रको सट्टा डा. शेखर कोइराला उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ ।
‘प्रकाशमानलाई समेत मनाएर सभापतिको साझा उम्मेदवारको रूपमा पौडेललाई अघि सार्ने सहमति भएको छ, प्रकाशमानले नमाने आ–आफ्नै ढंगले लड्ने कुरा भएको छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
सभापतिमा लड्न भन्दै शेखरले लामो समयदेखि तयारी गर्दै आएका छन् ।
रामचन्द्र पौडेल सभापतिको साझा उम्मेदवार बनेमा सभापतिको दाबी गरिरहेका शेखर, प्रकाशमान र डा. शशांक कोइराला पदाधिकारीमा बसेर साझा प्यानल बनाउने तयारी छ ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भोलिदेखि काठमाडौंमा शुरू हुँदैछ । संस्थापन पक्षले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।